कुमारीपन परीक्षण र मर्मत गराउँनेको संख्या थाहाँ पाउँदा चकित, कुमारीपन मर्मत सत्य हो की भ्रम ?(हेर्नुहोस भिडियो सहित) – Enepali Samchar
December 13, 2020 adminLeaveaComment on कुमारीपन परीक्षण र मर्मत गराउँनेको संख्या थाहाँ पाउँदा चकित, कुमारीपन मर्मत सत्य हो की भ्रम ?(हेर्नुहोस भिडियो सहित)
enepalisamchhar काठमाडौ । विवाह गर्नका लागि कुमारी युवत्ती खोज्नेहरु अहिले पनि समाजमा हुन्छन् । विकसित भनिएका धेरै देशहरुमा पनि यस खालको संस्कार रहँदै आएको छ । बीबीसी न्यूजबीट र १०० महिलाको टोलीले उनीहरूको अनुसन्धानमा पत्ता लगाए कि महिलाको विवादित कु’मारीप’न प’रीक्षण ब्रिटिश मेडिकल क्लिनिकमा गरिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार यो परिक्षण मानव अधिकारको उल्लङघन हो । यी संगठनहरू यो परीक्षणमा प्रतिबन्ध पनि चाहन्छन् । आलोचकहरू भन्छन कि यी परीक्षणहरू अवैज्ञानिक छन् र यसले प्रमाणित गर्न सक्दैन कि कसैको कु’मारीप’न बि’ग्रिएको छ कि छैन । बरु यो अपमान वा असमानको एक रूप हुन सक्छ।
यस परीक्षणमा, एक महिलाको ज’ननेंद्रि’य जाँ’च ग’रीन्छ कि हा’इमे’न (कु’मारीप’न प’त्ता लगाउँने झि’ल्ली) पूर्ण रूपमा छ कि छैन : बीबीसीले आफ्नो अनुसन्धानमा पत्ता लगाए कि धेरै निजी क्लिनिकहरूले कु’मारीप’ना म’र्मतको विज्ञापन गरिरहेका छन् र सम्पर्क गर्दा उनीहरूले १६० देखि ३०० पाउण्ड बीचमा कु’मारीप’न प’रीक्षण प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।ब’लपू’र्वक विवा’ह-बीबीसीले त्यस्ता २१ क्लिनिकहरू पत्ता लगाए र १६ क्लिनिकहरूमा प्रश्न उठाएको छ । यि सात मध्ये कन्फर्म्याइएको कु’मारीप’न प’रीक्षण र अन्य धेरै क्लिनिकहरूले आफ्नो अडान स्पष्ट गरेनन् । यी सबै क्लिनिकहरूमा यो भनिएको थियो कि त्यहाँ हा’इमे’न (कु’मारीपन’) म’र्मत ग’र्ने श’ल्यक्रि’या छ र यसको लागत ५०० देखि ३,००० पाउन्ड सम्म छ।
बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाको तथ्याङ्का अनुसार विगत पाँच बर्षमा त्यहाँ ६९ हा’इमे’न म’र्मत श’ल्यक्रिया ग’रिएको छ। न्यूजबीटले त्यस्तै एक केटीको बारेमा जानकारी पाएको थियो जसको कर्मा निर्वाणा नामको परोपकारी संस्थाले सहयोग पुर्‍यायो। यस संस्थाले पीडित विवाहलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। ती केटीले भनिन्, ‘मेरा बाबुआमाले मेरो धेरै मा’नसिक शो’ष ग’र्नुहु’न्थ्यो र उ’नीहरूले आ’फ्नै इच्छाले मलाई विवाह गरिदिन चाहन्थे। उनले थप्लै भनिन्, ‘मसँग भाग्नु पर्ने विकल्प थियो ।’ एक दिन हाम्रो समाजका एक बुढा सदस्यले मलाई मेरा साथीहरूसँग बाहिर भेट्नुभयो र मेरी आमालाई उनीहरूमध्ये एक मेरो प्रेमी हो भनेर बताउनुभयो। त्यस पछि हाम्रो समाजमाधेरै हल्ला फैलिन थाल्यो।
त्यस पछि त्यो केटीका अभिभावकले उनको कु’मारीप’न जाँ’चको बारेमा कुरा गरे। ती केटीले भनिन्, ‘मेरा बाबुआमा र परिवार जहाँ मेरो विवाहका लागि कुरा भइरहेको थियो, मेरा हुनेवाला श्रीमानले भने कि म कुमारी हुँ भनेर थाहा पाउन मैले पहिले कु’मारीप’न जाँ’च ग’र्नु पर्छ र त्यसपछि म विवाह गर्नेछु।’ उनले अगाडि थप्दै भनिन, ‘म ड’राएको थिए र यसको अर्थ के हो भनेर मैले बुझिन। मलाई लाग्यो कि भाग्नु नै मेरो एक मात्र विकल्प हो र मैले पनि त्यस्तै गरें।’ प्रिया मानोटाले कर्मा निर्वाणाको हेल्पलाइन देख्छिन् ।
उनले बताइन्, ‘हामीले धेरै केटीहरूको कल पाएका छौं जो यस बारे चिन्तित छन्। सम्भवतः किनभने उनको परिवारलाई थाहा भयो कि उनी एक सम्बन्धमा थिइन वा उनी कु’मारी नै थिइन् । हुनसक्छ उनको परिवारले उनलाई अनुसन्धानका लागि द’बाब दि’इरहेको छ र उनी परिणामको बारेमा चिन्तित छिन्।’ सम्मानको लागि यस्तो गलत कार्य र ज’बरज’स्ती वि’वाह जब एक केटीले आफ्नो पा’र्टनर छान्छ, शा’रीरिक इ’च्छाहरु पु’रा ग’र्न मन त अवश्य हुन्छ। तर त्यो भयो भने हामीले पीडितहरूको नै जी’वन स’काइएका धेरै घटनाहरू पनि यहाँ देख्यौं । परिवारले बाँकी रहेका पीडितहरूलाई आफुबाट अलग गरेका घटनापनि धेरै छन् ।
अब सोच्नुहोस् बेलायत जस्तो देशमा यस्तो छ भने विश्वभरी कु’मारीप’नका बा’रेमा के भइरहेको होला । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, कु’मारीप’न प’रीक्षण करिब २० देशहरुमा गरिन्छ, तर त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि केटीले पत्ता लगाएको छ या क’न्या कुमा’री नै छ । यो किनभने व्यायाम वा टेम्पून प्रयोग गर्ने जस्ता धेरै कारणहरूलेपनि हा’इमे’न च’कना’चूर हुन सक्छ। गत वर्ष, एक अमेरिकी र्‍याप कलाकार, टीआईले यसो भनिरहेका थिए कि उनले आफ्नी छोरीको हरेक वर्ष कु’मारीप’न प’रीक्षण गराउँदछन् ताकि उनको हा’इमे’न’को अ’वस्था थाहा पाउन सकियोस् ।
बीबीसीले यो पनि पत्ता लगायो कि हा’इमे’न म’र्मत किट ५० पाउण्डमा अनलाइन फेला परेको छ र उनीहरू दाबी गर्छन् कि तिनीहरू कु’मारीप’नमा फ’र्किनेछन्। हामीले १०४ पाउन्डमा त्यस्तै एउटा किट किनेका छौं जुन जर्मनीबाट आएको थियो। किटमा ६० मिलीलीटर तौल भएको टि’टीवाला जे’ल, प्ला’स्टिक ट्वी’टर, र’क्त क्या’प्सुल र ती’न साना प्याकेटहरू न’क्कली र’क्त स’मावेश ग’रिएको थियो। किटमा प्रयोगको लागि कुनै निर्देशनहरू लेखिएका थिएनन्। स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. अशफाक खानले कु’मारीप’न प’रीक्षण र हा’इमे’न म’र्मतको लागि धेरै पटक अनुरोधहरू प्राप्त भइरहेको स्वीकारिन् । उनले भनिन्, ‘मैले बुझ्दिन किन यो बेलायतमा अहिलेसम्म गैरकानुनी भएको छैन।
यो गै’र कानु’नी बनाउनु पर्छ। सबै भन्दा पहिले यो गलत छ कि यदि हा’इमे’न पू’रा छैन भने यसको मतलब केटी कु’मारी नै छैन। यो धेरै कारणहरूले फु’ट्न स’क्छ’। यदि यो फा’टिएको छ र मैले यसलाई मर्मत गर्नुपर्नेछ भनेर त्यसपछि म प्रमाणपत्र दिन सक्छु भने यसको मतलब यो हो कि मैले गलत प्रमाणपत्र दिदैछु।’ किनकी यो मर्मत गर्न सकिन्न । डा. अशफाक विश्वास गर्छन् कि यस प्रथाको बिरूद्ध अझ बढी कदमहरू चाल्नु पर्छ। उनले न्युजबीटलाई बताइन्, ‘जसरी ख’तनाको मु’द्दा उ’ठेको छ, विश्वव्यापी नेताहरूले पनि यस समस्याको बारेमा कुरा गरिरहेका छन । मेरो लागि यो अ’पराध हो र हामी आफैंलाई त्यस्तो प्रक्रियासँग जोड्दैछौं जुन नैतिक तवरमा सही छैन ।’भिडियो हेर्न 👇यहाँ खोल्नुहोस
यस वर्षको सुरूमा मध्यपूर्व महिला र समाजले कु’मारीप’न अ’नुसन्धान प्र’तिबन्ध गर्न अभियान चलाएको थियो । यसको संस्थापक हलाले तहेरीले भने, ‘हामी हा’इमा’न म’र्मत गर्न पनि रोक्न चाहन्छौं तर मानिसहरूलाई शिक्षा नदिएमा प्रतिबन्ध लगाउनु राम्रो भन्दा बढी हा’निकारक हुनेछ। यी अभ्यासहरू अझै भइरहेका छन् किनकि कु’मारीप’नको बा’रेमा व्यक्तिहरूको सोचाइ अझै पछाडि छ। यदि हामी हाम्रो समुदायलाई शिक्षित गर्न सक्दछौं र तिनीहरूको सोचाइ बदल्न सक्छौं भने हा’इमे’न म’र्मतको आवश्यकता पर्दैन। यो व्यवसाय आफैमा बन्द हुनेछ।’ कानून जरुरी छैन । उनले भनिन् बेलायत जस्तो देशमा त यस्तो छ भने विश्वका अरु देशहरुमा के होला ? स्रोत : बीबीसी
यी युवतीले लिन्छिन एक घण्टाको १२ लाख,पुरा पढ्नुहोस
ओलि सरकारले गर्‍यो पशुपतिमा १४१ किलो सुनको जलारी राख्ने यस्तो निर्णय